Boorsooyinka safarka ee ugu fiican: wareeg dhammaystiran oo loogu talagalay 2021
Guri > Warka Warshadaha > Boorsooyinka safarka ee ugu fiican: wareeg dhammaystiran oo loogu talagalay 2021
Haddii aad u socotid socodka degdegga ah ee buuraha ama aad qaadaneyso dhowr toddobaad markiiba, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad si habboon u qalabeysan tahay.
Waxaan socday ku dhowaad toban sano waxaanan isku dayay in ka badan toban boorsooyinka waaweyn ee socodka ... taasi waa sababta aan ugu qoray maqaalkan boorsooyinka ugu wanaagsan ee lagu tamashle tago iyo kuwa xiisaha leh si aan kaaga caawiyo inaad heshid xirmada nafta.
Baaskiilku waa mid ka mid ah waqtiyada aan ugu jeclahay safarka. Aniga ahaan, waa muhiim inaan ka baxo magaalada oo aan aado kaynta ama buuraha. Waxay kaa caawinaysaa inaad dib u dejiso batteriga oo aad dareento inaad ku xiran tahay dabeecadda. Intaa waxaa dheer, waa bilaash! Sida boorsada jeexjeexan, waxaan waqti badan ku qaatay kaamam iyo tamashlayn buuraha.
Waxaan qabaa shaki dhuumaaleysi ah, adiguna si isku mid ah ayaad u dareemaysaa
Nasiib darrose, xulashada boorsada ugu habboon ee socodka ma sahlana ...
Internetka waxaa buux dhaafiyay astaamo bannaanka yaal, dhammaantoodna sheeganaya inay yihiin kiishka "ugu fiican" socodka. Fursadaha qaar ee suuqa yaala waa qashin. Ku
Anigoo ah socdaal adduun iyo khibrad u soo maray oo soo safray muddo toban sano ah, waxaan shaqsiyan isku dayay mid kasta oo ka mid ah boorsooyinka socdaalka ee boostadan waxaanan ku soo qaaday socdaallo kala duwan iyo riwaayado kala duwan.
Qodobkaan, waxaan ku qiimeyn doonaa xirmada socodka ugu fiican adiga. Waxaan taxay boorsadayda ugu xiisaha badan iyo doorashada ugu fiican, ka dibna waxaan ku bari doonaa shirkadda qalabka bannaanka ee aan ugu jeclahay.
Iyada oo gacan laga helayo qodobkan, waxaad ogaan doontaa sida saxda ah ee aad raadineyso markaad dooranayso boorsada ugufiican socodka ...
Kuwani waa soo jeedimaha aan ugu jeclahay boorsooyinka dhabarka. Aynu quusinno
Jawaab deg deg ah: boorsada ugu fiican ee socodka
Osprey Aether / Ariel â € “The best" All Rounder "boorsada jeebka
Osprey Exos 58-boorsada lugta ah ee ugu wanaagsan ee fudud
Deuter Speed ​​Lite 20 - boorsada yar yar ee socodka
Roots Firfircoon oo dhabarka isku laaban - boorsada ugu fiican socodka
Berghaus Freeflow 35-Boorsada Lacagta Ugu Fiican Qiimaha
Deuter Air Contact-boorsada ugu fiican ee boorsooyinka-muddada-dheer
Boorsada Nomatic Travel-boorsada socodka ugu fiican ee socotada-gaaban
Waxyaabaha ay tahay in laga fiirsado marka la dooranayo boorsada ugu wanaagsan ee lagu socdo
Raaxo waa lagama maarmaan
Haddii aad xidhato shandad wakhti dheer ah, markaa waxaad dooneysaa inay ahaato mid aad u fiican
Markaad dooranayso boorsada socodka, qodobka ugu muhiimsan waa in la doorto wax raaxo leh.
Haddii aad shandooyin culus ku sidato boorsadaada, waxaad xaqiiqdii u baahan doontaa suun misigta ah 100% si aad inta ugu badan miisaankaaga u saarto miskahaaga intii aad ka lalmi lahayd garbahaaga oo aad dhabarka murgi lahayd.
18-kii maalmood ee la soo dhaafay, waxaan si raaxo leh u qaaday culeys dhan 20 kiilo oo waxaan lugaynayay boqolaal kiilomitir maxaa yeelay waxaan doortay boorso aad loo qaabeeyey, suuf wanaagsan leh, aadna amaan ugu ah dhabarka iyo miskaha. Waxaan u maleynayaa in boorsada socodka ugu raaxada leh ay yeelan doonto gadaal hawo leh, suun dhexda oo dhumuc weyn oo raaxo leh, iyo awood u lahaanshaha in lagu hagaajiyo meelo badan.
Nextâ € ¦
Waxaad heleysaa waxaad bixiso
Hadda waan kula soo xiriiri doonaa - lacagta badan ee aad qarash gareyso, boorsadaada socodka ee ugufiican waxaad heli doontaa
Boorsooyinka dhaadheer ee tayo sare leh ma ahan kuwo raqiis ah. In kasta oo ay jiraan xulashooyin qiimo-lacageed oo suuqa yaalla, waxaa ugu wanaagsan in loo tixgeliyo iibsigan inuu yahay maalgashi. Waxaan kugula talinayaa inaad qarash gareyso waxyar oo lacag ah sidaa darteed waxaad iibsan kartaa boorsadaada socodka oo leh damaanad qaad nololeed-si aad u hubiso inay weligeed sii jiri doonto
Fikradayda, waxaa haboon in la qarash gareeyo lacagta dheeriga ah lana doorto boorsada lagu safro ee loo yaqaan 'Osprey book trekking' si boorsadaadu ay u hesho dammaanada Osprey oo dhan ah 'taasoo la micno ah inay dayactirayaan ama badalayaan wax kastoo dhaca. Si kastaba ha noqotee, fadlan la soco inay jiraan waxyaabo ka reeban "Dammaanadda Qaadirka ah". Ma awoodi doonaan inay dayactiraan burburka diyaaradda, dhaawaca shilka, isticmaalka adag, xirashada, ama waxyeelada la xiriirta qoyaanka. Si kastaba ha noqotee, wali way kafiican tahay dammaanadaha badankood suuqa.
Wax khafiif ah raac
Ku fuula buurta. Venezuela Roraima oo leh boorsadayda boorsada Osprey
Waxaad dooneysaa in boorsadaadu ay ahaato sida ugu fudud ee suurtogalka ah, isla markaana isla markaasna noqota mid adag oo adkeysi leh. Waxaan haysan jiray boorsada dhabarka lagu shito, laakiin si dhakhso leh ayey u jabtay dartiis iyo jeexitaankii dartii awgeed.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, boorsooyinka ugufiican ayaa qafiif ah, marka tani dhib weyn ma ahan. Haddii tani ay tahay dhibaatadaada weyn, dooro shandad lagu raaco socodka.
Waxaad dooneysaa boorso adag oo aad soo qaadan karto
Waxaad dooneysaa inaad dooratid shandad adag oo adag oo adkeysan karta boodbood laakiin wali u muuqda mid dhoola cadeynaya. Waqtiyadan dambe, boorsooyinka badankood way adag yihiin, laakiin waxaad dooneysaa inaad hesho wax sidoo kale biyuhu xireen si looga hortago roobab mahiigaan ah inay alaabtu qoyaan.
Si kasta oo ay u adagtahay boorsadaadu, hadaad badanaa isticmaasho, ugu dambayntii way dhaawacmi doontaa â € “Shandadeyda way iiga baxday â €“ marka isku day markale inaad dooratid boorsada socodka oo leh dammaanad nololeed.
Boorsada jirku ku jiro ayaa ugu fiican
Had iyo jeer waxaan kugula talineynaa inaad tagtid boorso leh shax gudaha ah. Ulaha taageerada ee boorsooyinka dhaadheer ee ugu fiican ayaa lagu dhex dhisay boorsada halkii laga isticmaali lahaa bannaanka, taas oo ka dhigaysa mid wax ku ool ah oo fudud oo la qaadi karo.
Jaangooyada kore waxay ka dhigeysaa boorsadaada mid culus, i aamin markii aad duurjoogta ku dhex socoto, waxa ugu dambeeya ee aad dooneysaa waa mid weyn, oo isku dheelitiran qaab-boorsada adag oo kaa gaabinaya. Xir xirmo, uma baahnid dhisme weyn!
Awooddu waa furaha
Markaad dooranayso boorsada socodka, awoodda ayaa noqon karta go'aanka ugu muhiimsan
Lid ku ah caqiidada caanka ah: yaree ama guriga tag. Haddii aad u maleyneyso inaad tahay baakad iftiin leh oo aad qaadan karto shandad weyn, waxaa laga yaabaa inaad aakhirka ka buuxsato waxyaabo badan oo aan loo baahnayn, taasi waa caadi.
Doorashada boorsada fudud ayaa kaa caawin doonta inaad keydiso booska isla markaana yareyso culeyska saaran shandadaada.
Haddii aad ku socoto socod baraf ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad kordhiso cabirka, laakiin haddii kale, boorsada ugu fiican ee socodka waa inay ahaataa inta u dhexeysa 40 iyo 50 litir. Shakhsiyan, waxaan haystaa boorso socod oo 70-litir ah oo loogu talagalay safarada waaweyn, iyo boorso yar oo 30-litir ah oo loogu talagalay socodka maalinlaha ah.
Arimaha maadiga ah ...
Haddii aad tug raaceyso, waa inaad ogaataa taas, ugu dambeynti, waxaad u baahan doontaa inaad la kulanto cunsurradan. Roob, kuleyl iyo xitaa baraf, wax walbaa waxay dhacaan markaad cidlada ku jirto.
Sidaa darteed, markaad qorsheyneyso inaad iibsato mid ka mid ah boorsooyinka dhaadheer ee ugu wanaagsan, xulashada waxyaabaha saxda ah waa muhiim.
Maaddooyinka khafiifka ah iyo kuwa u adkaysta biyaha sida Dyneema ayaa ku habboon, gaar ahaan maxaa yeelay dharka ayaa biyuhu ka madhan yihiin. Way ka qaalisan tahay dharka kale sida nylon, laakiin waxaan damaanad qaadi karaa inay u qalanto maalgashiga!
Qalabka ugu wanaagsan ee boorsada ku jira ayaa ka qaalisan
Haddii aad horey lacag ugu qaadatay socodsiinta boorsada ugu fiican, ugu yaraan waxaad dooneysaa inay u muuqato mid wanaagsan. Waxaa jira xulashooyin badan oo laxiriira midabada iyo qaababka, markaa dooro mid kaa yeelaya inaad dareento galmo ... si fiican, hawdka dhoobada leh, waxaad dareemi doontaa sida ugu macquulsan ee macquul ah!
Boorsada ugu wanaagsan ee "All Rounder"
"Is haysta oo sahlan in la qaado"
Waxaan ku dhaartay boorsada Osprey. Waxay kaliya sameeyeen boorsada ugufiican mudo.
Osprey wuxuu had iyo jeer bilaabay qaar ka mid ah boorsooyinka ugu fiican suuqa, iyo Aether (ragga) iyo Ariel (dumarka) waa laba ka mid ah boorsooyinka dhabarka Osprey.
Aether / Ariel waxay leedahay dhammaan faa'iidooyinka boorsada Osprey kasta (dammaanad-wareega oo dhan, adkeysi iyo raaxo), laakiin qaabku waxyar ayuu ka yar yahay, taas oo ka dhigaysa boorsada ugu fiican ee socodka haddii aad qorsheyneyso safar gaaban.
Ragga-haddii aad jeceshahay inaad qaadatid qalab kale inta lagu guda jiro socodka, boorsada Aether 85 ayaa ka fiican, laakiin 95% waqtiga waxaan si fudud uga takhalusi karaa booska boorsada Aether 70l markaan socdo. Haddii aad doorbideyso wax yar, fiiri Osprey Talon 33; Mudanayaal, fiiri Osprey Sirrus 36.
Laakiin waxaa jira wax badan ...
1. Dammaanad-qaad nololeed
2. Aad ugu habboon dadka safarka ah ama socotada ah
3. Waari kara oo raaxo leh
1. Weyn â € “kuma haboona safarada gaagaaban
Intaa waxaa dheer, Aether iyo Ariel sidoo kale waxay leeyihiin jeebado iyo qaybo badan oo ay ku ilaalinayaan waxyaabaha la abaabulay, iyo qaybta dambe ee hawo-mareenka ee 'AirScape' ayaa kaa dhigeysa inaad qaboojiso inta lagu jiro xiisaha ugu diiran.
Haddii aad rabto inaad degto oo aad u baahan tahay inaad keento teendho iyo qalab fara badan, waxaad u baahan tahay boorsada xerada lagu seexdo, Osprey Aether kuuma deynayo.
Qalab aad u badan ayaad saareysaa cunugan, xitaa waxyaabo intaa ka badan ayaa lagu dhejin karaa ilmaha, maxaa yeelay Osprey Aether waa mid ka mid ah boorsooyinka waaweyn ee ugu raaxada badan suuqa, sidaa darteed wali dhoola cadeyn ayuu leeyahay.
Osprey Aether / Ariel ma saxbaa adiga?
Osprey wuxuu ahaa dookhayga sanado badan, iyo sabab macquul ah. Adkaysigooda iyo naqshadayntu waxay ka dhigayaan boorsooyinkooda ku habboon socodka ama safarka, iyo tan ugu muhiimsan, iyagu waa kuwo aad u fiican. Osprey Ether ayaa ah talobixinteyda ugu sareysa.
Boorsada ugu dambeysa ee Ultralight
"Boorsada fudud ee fudud oo leh raaxo aad u fiican iyo awood qaadis"
Haddii aad raadineyso boorsada khafiifka ah, boorsada badan ee caajiska ah ee suuqa ama safarkaaga soo socda ee soo socda ama safarka dheer ee safarka, markaa Osprey Exos 58 ayaa ah xulashadaada ugu fiican-Osprey Exos 58 waa mid ka mid ah boorsooyinka ugu wanaagsan ee Osprey ku wareegsan!
Farsamo ahaan, tani waa shandad yar oo miisaan yar, culeyskeeduna yahay 2.7 rodol oo keliya. Si kastaba ha noqotee, waxa aan rabo inaan dhaho ayaa ah in qaybtani ay ku jirto noocyo kala duwan. Ma wada heysato gambaleellada iyo foodhi-wadaha, mana laha culeyska boorsada socodka ee culeyskeedu yahay 2 illaa 3 jeer cabbirkeeda.
Qaab-dhismeedka dahaarka birta iftiinka ah wuxuu siiyaa taageero aad u fiican xitaa marka uu xamuulka qaadayo illaa 40 rodol. Qalabka AirSpeed ​​3-D ee mesh dhabarka ah ayaa loogu talagalay inuu la kulmo dhammaan baahiyahaaga hawo ee bilaashka ah iyo bixinta hawo wanaagsan si uu gadaal dambe uga dhigo mid qabow. 5 inch farqi adag ayaa udhaxeeya dhabarka iyo boorsada dhabarka! Macsalaameyn blues qoyan!
1. Aad uma weyna!
2. Minimalism-kaliya ayaa culeyskiisu yahay 2.7 rodol
3. Dammaanad qaad nololeed
1. Kuma filna safarka xerada dheer
2. Shaqooyin la'aanta Ether 70
Dhinaca boorsada, waxaad u isticmaali kartaa jeebka dhinacyada mesh mesh laba-kanaal elastic ah si aad ugu keydiso dhalooyinka biyaha iyo aaladaha kale ee boorsada leh oo leh xarkaha wax lagu duubo. Qeybta hoose ee Exos 58, waxaad isticmaali kartaa xarigyo dhejisyo dheeri ah si aad u sugto derbiyada jiifka ama teendhooyinka. Xargahaasi waa kuwo lakala goosan karo, haddiiba ay dhacdo inaad dhab ahaan ku jirto dhawr wiqiyadood.
Iyo, dabcan, boorsada waxay la timaaddaa dammaanadda nolosha Osprey, taas oo qayb ka ah sababta kalgacalka aan u qabo boorsooyinka Osprey uu u xoog badan yahay!
Haddii aad xiiseyneyso baakad khafiif ah, adkeysi leh, iyo raaxo leh, oo aad siiso meel ku filan alaabada aadka u fudud, markaa Osprey Exos 58 ayaa kugu habboon adiga. Haddii aad rabto inaad iibsato boorso laba toddobaad jir ah oo dhar, qalab iyo agabyo ah, hubi Osprey Volt 60, oo ah mid fudud oo waasac ah, taas oo ka dhigaysa fursad kale oo weyn oo tamashleyn ah.
Osprey Exos 58 ma kuu saxan yahay adiga?
Exos 58 wuu kayaryahay Aether 70, laakiin wuxuu leeyahay shaqooyin kayar. Waa boorso ku habboon kuwa jecel iftiinka socodka. Intaas waxaa sii dheer, kama badin kartid dammaanad-qaadkan noloshaada oo dhan!
To3 Xiriirka hawada Deuter
Boorsada ugu fiican ee boorsooyinka-muddada-dheer
Waa hagaag, markaa tani maahan boorsada Ultralight, laakiin waxay ka dhigeysaa liiska maxaa yeelay waa mid aad u fiican (laga yaabee xitaa mid ka mid ah boorsooyinka ugu raaxada badan ee la heli karo) oo ku habboon socodka dheer.
Suunka garbaha iyo suunka dhexda ayaa kufiican qaadista culeysyo culus, iyo nidaamka hawo qaadashadu waxay kaa dhigeysaa mid qabow oo cusub iyadoo aan loo eegin cimilada, taas oo ka dhigeysa mid ka mid ah boorsooyinka ugu wanaagsan ee maalinlaha ah.
1. Aad u raaxo badan
2. Loogu talagalay socodka dheeriga ah
3. Aad ugu habboon qaadista walxaha culus
1. culus oo weyn
2. Fikrado kala duwan oo ku saabsan dayactirka
3. U adkaysiga biyaha
Deuter Air waxay ku qalabeysan tahay dabool roobka ka bixi kara si ay wax waliba u qallajiyaan, iyo laba jiinyeer bac adag oo adkeysi badan leh.
Waxaan kugula talinayaa boorsadan safarka masaafada dheer ama dadka jecel inay qaadaan waxyaabo badan laakiin aan rabin inay ka iftiimaan Osprey Aether. Deuter Air qiime weyn ayey ugu fadhidaa lacag waana boorsada ugu fiican miisaaniyada qaybtan cabirka ah. Ciddiyaha adag, waxaa lagu garaaci karaa xiisaha kasta.
Xiriirka Hawada Deuter ma saxbaa adiga?
Haddii aad tahay xero u heellan oo jecel socodka dheeriga ah, fadlan kaqeyb gal tartanka naftaada. In kasta oo xoogaa culus, adkaysiga iyo raaxada Deuterku lama mid aha, waxayna iska bixin karaan naftooda marar badan.
Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato xirmadan, iska hubi inaad aqriso dib-u-eegista ku saabsan Dueter Air Contact.
Roots firfircoon boorsada isku laabma
Boorsada ugu fiican ee socodka
Boorsadaan la laaban karo waa tan ugu fiican miisaanka culus maxaa yeelay waa mid aad u fudud oo sahlan in la qaado (kaliya 10 wiqiyadood), laakiin wali waa mid waara oo ku filan la qabsiga canaasiirta kala duwan. Markaad rabto inaad ka baxdo xerada aasaasiga ah oo aad sahamiso aagga ku hareeraysan, tani waa boorso weyn oo kugu qaadi karta safar maalinle ah.
Awood u leh 34 litir, waxaad haysataa meel kugu filan oo aad ku qaadatid biyo dheeri ah, cunto, lakabka biyaha iyo safarada maalinlaha ah ee muhiimka ah. Waxaan jecelahay inay ku siiso 7 jeebado si fudud loo isticmaali karo iyo boorsooyin si loo habeeyo alaabtaada. Si aan runta u sheego, ma aanan arkin boorso sidan oo kale isku laaban oo abaabulan.
Ugu dambeyntiina, iibsasho kasta, Roots Firfircoon ayaa ugu deeqi doona mid ka mid ah dhowr hay'adaha samafalka ee la shaqeeya si ay uga caawiyaan nadiifinta dhulkeenna. Haddii aadan jeclayn boorsooyinka dhabarka laaban karo, waxaad ku raaxeysan kartaa 30-maalmood oo dammaanad-celin lacageed ah.
1. Laabilaabi karo oo fudud
2. Naqshad samaynta iyo abaabulka
4. Aad ugu habboon socodka
1. Uma cusla sida boorsooyinka kale ee liiska ku jira
2. Uma habboona safarka maalmo badan
Iibsasho kasta, waxay ugu deeqaan mid ka mid ah hay'adaha samafalka ee deegaanka si ay uga caawiyaan nadiifinta dhulkeenna si aan ugu raaxeysanno tacaburro badan sannadaha soo socda.
Boorsada Firfircoon ee Firfircoon sax ma kuu tahay?
Haddii aad sahamineyso magaalada ama hawdka, boorsadaan waxay ku geyn kartaa meel kasta. Maaddaama ay tahay boorso khafiif ah oo laallaaban karo oo ka samaysan waxyaabo naylool ah oo aan biyuhu adagayn, waa shandad ku habboon socodka. Ma rumaysan karno in boorsadani ay qaadi karto 34 litir.
5 REI Co-op Traverse 35 jawaan
Boorsada socodka socodka ugufiican
"Boorsada doorashada ee safarada gaagaaban"
Waxaan u isticmaalay REI Traverse boorsadayda khafiifka ah ee fudud, oo ku habboon socod maalinle ah.
Tani waa jahannamada boorsada, boorsada ugu wanaagsan ee miisaaniyadda ee aan soo maray. Tixgelinta tayada, waa wax jaban. Waxay leedahay boorsooyin badan oo wax lagu keydiyo, suun dhexda lagu xirto oo suuf ah, taageero gadaal ka socota laakiin neefsan kara iyo dabool roob lagu dhex dhisay.
1. Qiimaha mudnaanta leh!
2. Yar-aad ugu habboon socodka dheer
3. Hawlo badan iyo jeebado
1. Jeebka miskaha ayaa ka sii weynaan kara
2. Waxaad ku yareyn kartaa qiimaha 10 doolar oo kale
Waa boorsada ugu fiican 35-litir, oo kufiican socodka maalinlaha ah ama socodka dheeriga ah ee dhamaadka usbuuc dhammaadka, maahan socod dheer halkaas oo ay tahay inaad keento teendhooyin iyo cunto. Waa mid ka mid ah boorsooyinka ugu wanaagsan ee lagu tamashleeyo dhamaadka usbuuca.
Lamaane REI ah sax makuu yahay adiga?
Ma waxaad raadineysaa boorso khafiif ah oo loogu talagalay socodka degdegga ah maalmaha fasaxa? Wareegyadu waxay noqon karaan boorsada naftaada. Tayada wax soo saarka REI waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo aan ku habboonayn safarada xerada, waxayna ahaayeen mid ka mid ah meelaha aan u baahan yahay inaan arko safarada iyo socodka sannado badan. Intaa waxaa dheer, qiimaha waa wanaagsan yahay oo dhuuban!
Boorsada ugu yar ee socodka
"Wuu kufiican yahay tartanka tacaburka, fuulitaanka isboortiga ama socodka"
Haddii aad u socotid safar maalin fudud oo buuraha ah, markaa waxaad ku baxsan kartaa boorsada yar ee socodka, iyo Deuter Speed ​​Lite waa mid ka mid ah.
Ciyaartoyda adkeysiga leh waa in la tixgeliyaa marka la sameynayo. Tani waa shandad aad u fudud oo qafiif ah, oo culeyskeedu dhan yahay 1 rodol oo keliya, waana mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee lacag-boorsooyinka yaryar lagu raaco ee suuqa yaalla.
1. Safarka maalinta ugu habboon!
2. Naqshadeynta cayaaraha
3. Iftiin xad dhaaf ah
1. Aan ku habboonayn socodka dheer
2. Tirada haweenku waa isku dhafan yihiin
Tani waa boorsada ugu qiimaha-lacag-badan ee cabbirkan ah.
Deuter Speed ​​Lite ma kugu habboon yahay adiga?
Kuma haboona kaambeyn ama socod dheer. Haddii aad raadineyso boorsada qiimaha fudud ee qaaliga ah ee socodka, way adag tahay inaad ka adkaato Deuter Speed ​​Lite.
7 Boorsada Nomatiga ah
Boorsada safarka ee ugu fiican 40-litir socod maalin dhan
Ma raadineysaa boorsada boorsada ee fasaxa soo socda oo aad qorsheyneyso xoogaa socod ah inta aad ku sii jirto? Miyaanad doonaynin inaad ku warwareegto boorsada khaaska ah ee 60-litir ama 70-litir ah intaad safrayso?
Waxaan baranay in qof kastaa uusan dooneyn inuu qaato boorsooyinka waaweyn ee safarka ah markii aad u safrayso dibadda; isla mar ahaantaana, waxaan ogaanay in dadku aysan rabin in lagu koobo xirmooyinka xirfadleyda ah oo aad u badan.
Nasiib wanaag, boorsada Nomatic Travel waa boorso wareega ah oo la qabsan karta xaalado kala duwan. Dad badan ayaa dhaha Nomatic waa boorsada ugu fiican safarka, waana u aragnaa bayaankan.
Boorsada Nomatic waa mid aad u fiican maxaa yeelay waa mid fudud oo aad waxtar u leh. Waxay adeegsan doontaa dhammaan meelaha bannaan ee suurtogalka ah waxaana si weyn loogu ammaanay tayada abaabulkeeda. Dhab ahaan, boorsadani waa mid hal abuur leh marka loo eego ergonomiska, waadna ku keydin kartaa waxyaabo badan oo kala duwan wiilkan xun.
Nomatic waa mid adag oo raaxo leh oo ku filan inuu wax ka qabto socodka qaar, dad badan ayaa dhab ahaantii u qaaday waddooyinka. Dabcan, waxaa jira meel bannaan oo loogu talagalay waxyaabaha safarka maalinlaha ah qaarkood, sida dhalooyinka biyaha iyo xirmooyinka gargaarka degdegga ah ee aasaasiga ah, in kastoo aad si cad u rabto inaad uga tagto hudheelka inta badan alaabada.
Waxaa la dhihi karaa tani maahan boorso lagu safrayo meelaha qallafsan iyo meelaha aan sinnayn, sidoo kale boorsada uma ahan safarka muddada-dheer ee Koonfur-bari Aasiya ama meelaha kale. Nomatic aad ayuu u yar yahay oo looma qorsheynin nooca noocan ah tacaburka.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan Bacda Safarka ee Nomatic, ka fiiri dib-u-eegis qoto dheer halkan!
Nomatic sax ma kuu tahay?
Nomatic waa shandad-socod wanaagsan oo loogu tala galay kuwa ku safraya safar yar isla markaana doonaya inay waxyar u fuulaan. Haddii aad rabto inaad qaado safar adag, waxaad u baahan kartaa inaad ku iibsato boorso kale liiskaan.
Boorsooyin badan oo socod ah
Osprey Aether 85-Boorsada Ugu Fiican ee Dalxiiska
"All-wareega dammaanad-Osprey wuxuu hagaajiyaa dhammaan waxyeelada"
Haa, Osprey kale, laakiin ma jiraan wax aan sameyn karo. Kani waa boorsada dhabarka ee aan istcimaalay ku dhowaad toban sano. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Osprey waa inay bixiyaan dammaanad dhan-wareeg ah. Tani waxay ka dhigan tahay inay dayactir ku sameyn doonaan wixii dhaawac ah ee ku dhaca shandadaada dhabarka. weligiis iyo weligiisba.
Boorsooyinka Osprey waa qaali, laakiin dhab ahaan waxaad u iibsataa nolosha. Afar sano ka hor, boorsadayda waxaa dayactiray Osprey, mar dhowna waxaan u diri doonaa xoogaa dayactir ah si aan u hagaajiyo suumanka suunka iyo jeebadaha dibedda ee waxyeellada gaadhay.
Boorsadan dhabta ah ee dhabarku aad u adag tahay; Toban sano oo safaro boorsooyin ah oo aan kala go 'lahayn, weligay ma dhaawicin ama ma jeexjeexin jirka ugu weyn ee boorsada, kaliya waxyaabaha yaryar ayaa jabay (badanaa shan sano kadib!). Osprey Aether 85 waa boorso safar oo ballaaran; culeyskiisu waa 85 litir waana mid aad u raaxo badan iyada oo ay ugu wacan tahay suunka misigta la qaabeeyey. Waxay la jaanqaadi kartaa nidaamyada fuuq-baxa waxayna leedahay meel lagu keydiyo oo ku filan oo waxyaabo badan si fudud loogu xamuul karo â € “Mar baan saddex teendho bannaanka ku xidhay, oo waxaan teendhada ku dhex isticmaali jiray teendhada afraad oo lagu daray qalabka wax lagu kariyo, bacda jiifka, cuntada, dharka, elektarooniga, iwm. Fikradayda, tani waa boorsada ugu wanaagsan ee lagu tamashleeyo Osprey.
Waxaad ku ridi kartaa wax walba shandaddan oo waxay ahaan doontaa mid raaxo leh oo si fudud loo maareeyo. Kuma talin karo wax ku filan Osprey, kani waa boorsooyin fudud oo fudud oo Osprey ah. Haddii aad rabto inaad iibsato wax ka yar, fadlan dooro boorsada Osprey.
WANDRD PRVKE 31 â € “Boorsada ugu wanaagsan ee lagu socdo ee sawir qaadayaasha
"Dhammaan qalabka ilaali"
WNDRED PRVKE 31 wuu xiran yahay waana boorsada ugu wanaagsan ee lagu qaato sawir qaadayaasha. Boorsadan galmo, muuqaal leh, oo si fiican loo qaabeeyey ayaa la rinjiyeeyay, oo ay ka buuxaan astaamo iyo qaybo, waxayna qaban karaan qalab badan Waxaan u isticmaalayay mid ka mid ah kuwan inaan ku qaato fujifilm-ka-2-meyd oo kamarad leh, 3 lenses iyo qalab badan - dhibna ma leh.
Haddii aad rabto inaad si dhab ah ugu rogto mid ka mid ah boorsooyinka ugu wanaagsan ee buur fuulista, waxaan kugula talinayaa inaad ku isticmaasho aaladda loo yaqaan 'Peak Design camera clip' si aad uga dhigi karto kamaradda sintaada ama suunka xabadka ee boorsadaada kuna adeegso dhowr ilbiriqsi gudahood. . Haddii aad tahay sawir qaade xamaasad leh, markaa tani waa socod socod iyo boorsada boorsada fiican.
Sababtoo ah kani waa hage loogu talagalay dadka tamashleynaya, waa inaan sidoo kale idhaahdaa WANDRD PRVKE 31 sidoo kale waa boorso socod raaxo leh oo aad u fiican. Dabcan, mar haddii ay dhaafto 15 kg, wax yar ayey dhib noqon doontaa, wayna fiicnaan laheyd in garbaha lagu daro xarigyo dheellitir dheeri ah. Markaan sidaas iri, marka laga reebo WNDRED, ma dooran doono boorso kale oo safarka sawir qaadista ah.
Si aad wax badan uga ogaato boorsada sawir qaadista ah, hubi inaad iska hubiso dib u eegista buuxda ee WNDRD PRVKE 31 halkan!
Xirmooyinka Gregory Alpinisto 50-xabbad - boorsada ugu wanaagsan ee socodka xilliga qaboobaha
Haddii aad raadineysid boorsada ugu wanaagsan ee loogu talagalay riwaayadaha alpine, fadlan ha u sii jeedin! Gregory Alpinisto waa mid ka mid ah boorsooyinka ugu wanaagsan ee socodka, maxaa yeelay waxaa si gaar ah loogu talagalay jawiga xilliga qaboobaha. Shandada boorsada waxay leedahay nidaam sarwaal baraf ah iyo qaybo kala geddisan oo lakala saari karo, oo aad ugu habboon safarka barafka. Tani sidoo kale waa boorso weyn, waana hubaal waad ku isticmaali kartaa safaradaada aduunka oo dhan.
Gregory Alpinisto (Gregory Alpinisto) waa mid aad wax ku ool ah maxaa yeelay wuxuu leeyahay faraantiyo giraan badan iyo qaybo kale oo go'an. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay dhibco baarkooda, qalabka gacmo-gashiyada saaxiibtinimo leh iyo suunka suunka misigta. Haddii aad tahay qof jecel hiwaayadda jiilaalka, markaa tani waxay noqon kartaa boorsada ugu wanaagsan ee Gregory ee safarada buuraha.
The North Face Banchee â € “Boorsada ugu fiican ee loogu talagalay dadka lugeeya ee OCD
Haddii ay jiraan boorsadan gaarka ah ee kor loo qaadayo, waa jeebado badan iyo qaybo badan. North Face Banchee waa mid ka mid ah boorsooyinka ugu habboon ee socodka, maxaa yeelay waxay leedahay 8 jeebado kala duwan oo ku yaal dhabarka, dhinacyada iyo xitaa suunka misigta.
Waxaa jira meel bannaan oo ku filan oo lagu keydiyo qalabka duugga ah ee dhaqanka iyo xitaa koofiyadaha haddii ay dhacdo inaad rabto inaad ku darto wax yar oo fuulitaanka dareenkaaga.
In kasta oo uu waasac yahay, Banchee weli waa khafiif. Culeyskiisu waa 3 rodol iyo 10 wiqiyadood waana mid aad u deggan oo aad ugu habboon socodka adag. Haddii aad raadineyso boorsada ugu fiican ee 50L ee socodka, markaa Banchee waa xulasho wanaagsan.
Gunaanad: Marka, waa maxay boorsada socodka ugu fiican?
Boorsadee socodkee ayaad dooran laheyd?
Si daacadnimo ah, waxay kuxirantahay xiisaha aad sameyneyso-ma waxaad ku baxsan doontaa buuraha dhowr toddobaad markiiba ama maalin uun ma ku socotaa?
Waxaan ku dhaaranayaa Osprey - runtii ma jiro wax tartan ah, Osprey wuxuu hubaal ka dhigi doonaa baakadaha ugu fiican adduunka - su'aashu waxay tahay, ma awoodi kartaa qiimaha?
Inta badan safarada safarka badan, waxaan qaadan doonaa boorsada Osprey Aether 70-litir oo loogu tala galay trekking. Haddii aan u socdo safar dhowr toddobaad ah, waxaan qaadan doonaa boorsada Osprey Aether 85-litir. In kasta oo ay ballaaran tahay, waxaan u maleynayaa inay tahay mid aad u fiican. Tani dhib maahan, aniga ahaan.
Wixii kasta inta lagu jiro usbuuca, waxaan xambaari doonaa REI Co-op Traverse, waa haddii aysan ahayn inaan teendho qaato oo aan ku dhex seexdo aqal ama qol.
"Baro sida loo taageero boggan. Waxaan ku dadaalaynaa inaan si bilaash ah ugu daabacno ilaha boorsooyinka boorsada! Waxan oo dhami waa inay ka caawiyaan aqristayaasheena boorsooyinka wanaagsan (waa adiga!). Fadlan booqo xiriirkan si aad u baratid sida loo caawiyo in websaydhka kor loo qaado oo ordaya
Ujeedada daahfurnaanta awgeed, qaar ka mid ah xiriiriyeyaasha ku jira mawduuceena waa xiriiriyeyaal xiriir la leh. Tan macnaheedu waxa weeye haddii aad ballansatid hoy, buugaag aad iibsato ama caymiskaaga aad u kala soocdo, waxaan kaa qaadi doonnaa guddi yar adigoon bixin wax lacag ah oo dheeri ah. Waxaan kaliya ku xirnaan doonaa nuxurka aan runti isticmaalo, oo waligay ma aqbali doono badeecooyinka ama adeegyada aan buuxin shuruudaha. waad ku mahadsantahay taageeradaada.
Dhaar-Runtii ma jiro wax tartan ah, Osprey ayaa hubaal ka dhigi doona baakadaha ugu fiican adduunka-su’aashu waxay tahay, ma awoodi kartaa qiimaha?
Hore:Aqoonta gadashada qalabka: afar tabaha lagu doorto boorsada dhabarka ee banaanka